Home News (Daawo) RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka…Sabab?
(Daawo) RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka…Sabab?
Sida aay Muqdisho Online u caddeeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa habeenkii xalay ahaa qaatay lacag dhan $5000 oo doollar, taasoo lagu siiyay kaliya in aanay saxiixin ama soo xaadirin kalfadhiga baarlamaanka. Lacagtaas ayaa waxaa bixinayay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi isagoo wakiishay Xil. Khadiijo Maxamed Diiriye oo gurigeeda lagu bixinaayay lacagtaas.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay shiikha ugu weyn Soomaaliya (MUFTI) Sheekh Bashiir Salaad
Next articleSharif Xassan oo sheegay in ay adag tahay in RW Xassan Kheyre la badbaadiyo
Al-shabaab oo sheegatay in ay Dishay Saraakiil keenyaan ah Ka dib...